Concord flyght olana
hatambatra Concord flyght olana
1 taona 6 volana lasa izay #713 by casbad
Ve misy olona manana olana manidina ny ifanarahan'i? ny anankiray avy amin'izany no nahazo fahitana dia mitady ny aiko .... (nitontontontona sy mampihorohoro sy ny lafiny Saika haka taratasy famenoana mandritra ny sidina)
1 taona 6 volana lasa izay #714 by Dariussssss
Maro ireo fiaramanidina eto no tapaka ... tsy misy vaovao. Ny Concorde dia mety tsara, saingy mila fahalalana be dia be izy. Tsy maintsy mandefitra ny gazy ALL THE TIME ianao. Izany no hany fomba ahafahany manidina miorina.
1 taona 6 volana lasa izay #716 by Gh0stRider203
Eny, tapaka izy ireo fa Airbus! LOL Nianiana aho fa nahita lahatsoratra maro mikasika olana amin'ny fiaramanidina fiaramanidina Airbus fa tsy i Boeing
1 taona 6 volana lasa izay #720 by casbad
Dude !!!! fantatrao ve ny fomba fiasan'ny fitaovana famindrana solika? Nanandrana niraviravy azy aho fa betsaka ny mijery sy mamaky kely ... misy fitaovana mamaky boky ve?
1 taona 1 herinandro lasa izay #947 by DRCW
Ny fifanekena dia biby hafa samihafa, toy ny sarin'ny fiaramanidina goavana indrindra. Tokony hotsaraina ny foibe. Tokony hoheverina ihany koa ny haavony, satria miakatra haingana ny hoditry ny fiaramanidina. Ampitahao ny mpandeha sy ny entana hizaka ny herinao. Vakio ireo fomba amam-panazavana. Mianara momba ilay fiaramanidina. Misy ny fahadisoana miparitaka amin'ny fiaramanidina izay sarotra amin'ny sofina amin'ny endriky ny mozika izay simba. Namorona ity lahatahiry ity tao anaty ordinatera feo ny mpamorona. Mba hanaisotra azy io, sokafy ny ordinatera feo ary mandehana amin'ny alalan'ny feo samihafa mandra-pahitanao ilay mozika ratsy, ary tsindrio mahitsy ary esory izany, tsara daholo.
Fotoana mamorona pejy: 0.204 segondra